जाडोमा मर्निङ वाक जाँदा किन अपनाउनुपर्छ सावधानी ? - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ टिप्स ∕ जाडोमा मर्निङ वाक जाँदा किन अपनाउनुपर्छ सावधानी ?
जाडोमा मर्निङ वाक जाँदा किन अपनाउनुपर्छ सावधानी ?
डा.प्रकाशराज रेग्मी मुटुरोग विशेषज्ञ शुक्रबार, २०७६ कात्तिक २२ गते, ०७:३० मा प्रकाशित
चिसो मौसममा मर्निङ वाक गर्नु हुँदैन भनेर धेरै मानिसले व्यायाम गर्न बन्द गर्ने गरेको पाइन्छ । चिसो मौसमका कारण मर्निङ वाक वा शारीरिक व्यायाम गर्न नै छाड्नुभन्दा पनि विशेष सावधानी अपनाएर गर्नु उचित हुन्छ ।
मुटुरोगी, हृद्धयघात, अनियन्त्रित रक्तचाप, मधुमेह, उच्च कोलस्ट्रोल, दीर्घरोगी, दमका रोगी तथा शारीरिक रुपले निस्क्रिय भएका पाको व्यक्तिहरुले चिसो मौसममा व्यायाम वा मर्निङ वाक गर्दा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ ।
जाडो याममा हाम्रो शरीरमा विभिन्न किसिमका हर्मोनको मात्रा वृद्धि हुने भएकाले रगतको भिस्कोसिटी (बाक्लोपना) बढ्छ । तर, चिसोका कारण रक्तनली भने खुम्चन्छ । यसले रक्तप्रवाह असामान्य भई मुटुमा अक्सिजनको कमी हुन्छ । परिणाम स्वरुप मुटुले सामान्य अवस्थामाभन्दा बढी काम गर्नुपर्छ, जसले रक्तनलीमा रगत जमेर हृद्धयघात र मस्तिष्कघात समेत हुनसक्छ ।
प्रायः मानिसले पाँचदेखि सात बजेको बीचमा मर्निङ वाक गर्ने गरेका छन् । तर विहानीपख विशेषगरी जाडो याममा वायुमण्डलमा बढी प्रदुषण हुन्छ । यस हिसाबले हाम्रो वातावरण पनि मर्निङ वाक गर्न उपयुक्त छैन । त्यसैले वाकिङ गर्न चिसोमा बाहिर निस्कनुभन्दा घरभित्रै व्यायाम गर्नु धेरै लाभदायी हुन्छ ।
चिसोमा मर्निङवाक गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा
चिसो नपस्ने न्यानो कपडा लगाएर वाकिङ जाने ।
व्यायाम वा मर्निङ वाक सुरु गर्नुअघि हल्का मनतातो पानी पिउने ।
मास्कको प्रयोग गर्ने ।
व्यायाम सुरु गर्नुअघि वार्मअप गर्ने ।
सकेसम्म घाम उदाएपछि वाकिङमा निस्कने ।